श्रीमती आफूभन्दा सिनियर भन्न लाज लाग्छ ? « Sansar News
श्रीमती आफूभन्दा सिनियर भन्न लाज लाग्छ ?
२५ जेष्ठ २०७४, बिहीबार १४:५२
श्रीमान चिनेकै पात्र हुन उनकी श्रीमतीको पोहोरसाल मात्र बढुवा भयो । दुवैजना सँगै सरकारी जागिरमा छिरेका श्रीमान जहाँको त्यही छन श्रीमतीले बढुवा पड्काइहालिन । एउटै तहमा हुँदासम्म आफ्नी श्रीमतीको बारेमा खुब चर्चा गर्ने महोदय श्रीमतीको बढुवा भएर आफू भन्दा दुइतह माथि पुगेपछि अवाक बन्न पुगे । उनका घरका आफन्तले समेत स्वास्नी भन्दा तल्लो तहमा बसेर के काम गर्छस ? कि जागिर छोड् होइन भने जसरी भएपनि बढुवा भएर देखा भन्न थाले । आफन्तले भनेजस्तै सजिलो भए त हुन्थ्यो नि । व्यक्तिगत रुपमा ति व्यक्ति श्रीमतीको नाम निस्केकोमा निकै खुसी छन, म लोग्ने मान्छे हुँ अहिले नभएपनि अर्को वर्ष भइहाल्छ, महिलालार्ई हामी पुरुषलाई जस्तो सजिलो छैन, घर व्यवहार बालबच्चा सबैतिर हेर्दा गाह्रो हुन्छ । श्रीमतीको अहिले भयो अर्कोचोटी मेरो पक्कै होला भन्नेमा उनि ढुक्क छन तर आफन्तको करकरले सरकारी जागिर छोड् भन्ने सम्मका बचन सुन्नुपर्ने अवस्था आयो । उनका दिदीबहिनीले समेत तँ भन्दा माथिल्लो तहमा पुगि भोली तँलाई नोक्कर बनाउँछे बरु जागिर छोडेर कोरिया जा टन्न पैसा कमाएर देखा सम्म भन्न भ्याए । बल्लतल्ल खाएको सरकारी जागिर जस्ले जे भनेपनि सहेर बसेका उनलाई आमाबुवा, नजिकका आफन्तले समेत थुइक्क नार्मद भने । स्वयम श्रीमतीले श्रीमानलार्ई केही भनेकी छैनन, दुबै जनाको भएको भए हुन्थ्यो, एकजनाको भयो जो भएपनि हाम्रै परिवारका सदस्य नै सफल भइयो त्यही ठुलो कुरा हो भन्छिन श्रीमती । तर आफन्तको मन पोलेर भत्भती भइसकेको छ ।
जब श्रीमती माथिल्लो तहमा बढुवा हुन्छिन श्रीमानले आफू हेपिएको महसुस गर्छन वा साथीभाइले श्रीमती भन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने रहेछ भन्छन भनेर हो श्रीमतीको खुलेर तारिफ गर्न सक्दैनन । हाम्रो कस्तो मानसिकता हो ? श्रीमान मात्रै माथिल्लो ओहोदामा हुनुपर्छ भन्ने र श्रीमती माथिल्लो तहमा गएपछि सोझै हेपिएको ठान्ने प्रबृतिले परिवारलाई बलियो बनाउने भन्दापनि चिराचिरा बनाउने काम गर्छ । सम्बन्ध एक ठाऊँमा छ काम अर्को ठाऊँमा छ , कामको सम्मान गरौँ, आफन्तको इज्जत गरौँ न ।
श्रीमान भन्छन, नारीलार्ई अवसर भएन, गर्न पाएनन, गर्न दिएनन भन्छन भाषण गर्दा नारा लगाउँदा तर आफ्नै परिवारमा श्रीमतीको बढुवा हुँदा मलाई जागिर छोड समेत भन्न भ्याए । खिन्न हुँदै भने, यो मानसिकताले कहिले प्रगती होला खै ? आफूलाई चिन्ता छैन दुनियालाई टाउको दुखेर बसिसक्नु छैन ।
कतिपय अवस्थामा श्रीमती आफूभन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत श्रीमानको बारेमा खुबै चर्चा गर्छिन । मेरो श्रीमान फलानो अफिसको यो तहको कर्मचारी हुन भनेर । जब श्रीमती श्रीमान भन्दा माथिल्लो तहमा पुग्छिन आफ्नो श्रीमानको दर्जाबारे सकभर सुनाउन चाहदिनन । श्रीमानले गृहणाी श्रीमती वा आफू भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत हुँदासम्म आफ्नी श्रीमतीको बारेमा बकाइदा सुनाउँछन, मेरी श्रीमती गृहणाी हुन वा फलानो कार्यालयमा काम गर्छिन् वा यति तहकी कर्मचारी हुन भनेर । जब श्रीमती माथिल्लो तहमा बढुवा हुन्छिन श्रीमानले आफू हेपिएको महसुस गर्छन वा साथीभाइले श्रीमती भन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने रहेछ भन्छन भनेर हो श्रीमतीको खुलेर तारिफ गर्न सक्दैनन । हाम्रो कस्तो मानसिकता हो ? श्रीमान मात्रै माथिल्लो ओहोदामा हुनुपर्छ भन्ने र श्रीमती माथिल्लो तहमा गएपछि सोझै हेपिएको ठान्ने प्रबृतिले परिवारलाई बलियो बनाउने भन्दापनि चिराचिरा बनाउने काम गर्छ । सम्बन्ध एक ठाऊँमा छ काम अर्को ठाऊँमा छ , कामको सम्मान गरौँ, आफन्तको इज्जत गरौँ न । आखिर परिवारका आफ्ना सदस्यको प्रगती भएको कुरा एकजनाको लागि खुसीको सवाल किन हुन्छ ? एकजनाको प्रगती हुँदा दुबैजना वा परिवारका आफन्त किन खुलेर खुसी हुन सक्दैनन ?
एउटा परिवार एक्लैले अहिलेको महगीको जमानामा चलाउन कठिन छ, दुबैजना सक्षम हुनुपर्छ, कामकाजी हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म पनि किन भन्न सक्दैनौ ? आफूले दुइ पैसा नकमाउँदै त छोरालाई काबुमा पारेकी छ अझ दुइचार पैसा कमाएपछि त जोइटिग्रे बनाउँछे होला मेरो छोरालाई भन्ने बुआआमा पनि देखिएको छ यही शहरमा । सोँच सकिर्ण भयो भने कसैले कसैलाई दबाउन, हेप्न जागिर खानै पर्दैन, पैसा कमाउनै पर्दैन उसको बोली बचन र व्यवहार नै काफी हुन्छ ।
एउटा घटनाले सधै मन पोलिरहन्छ, श्रीमान श्रीमती दुवैजना एकै तहमा कार्यरत कर्मचारी हुन । दुबैजनाले बढुवामा एकैचोटी नाम निकाले, संयोगबश श्रीमतीको नाम बढुवाको सुचिमा परेन श्रीमान मात्रै बढुवा भए । उनकै आफन्तले सुनाइहाले, धन्न दाइको बढुवा भयो र राम्रै भयो , भाउजुको बढुवा भएर दाइको नभएको भए त मरेको जुनी हुन्थ्यो । दाइ भन्दा भाउजु माथिल्लो तहमा पुगेपछि सिधै हाम्रो दाइलाई हेपिहाल्छिन नि । भाउजुको नभएको ठिकै भयो अर्को वर्ष निकालिहाल्छिन नि भन्ने सुनियो । आखिर भाउजुको नाम निस्केन दाइको निस्कियो अब आफू माथिल्लो तहमा गएँ भनेर दाइले भाउजुलाई हेपिरहलान त ? यदि भाउजुले दाइको सट्टा बढुवाको सिट आफूले पाएको भए दाइलाई हेपिहाल्दी होलिन त ? उनका पढेलेखेका, जागिर खाइसकेका आफन्तले नै किन यसो भन्छन ? आखिर तह र तप्काले होइन परिवर्तन हाम्रो मगजभित्र थुनिएर बसेको छ, त्यो गुम्सिएको कालोमैलो नहटाएसम्म भाषण र नाराले परिवर्तन हुँदैन ।
कोही कसैसँग पनि हेपिन नपरोस र हेपिएको, दबिएको देख्न नपरोस भन्ने कामको थालनी आफ्नै परिवारबाट सुरु गरौँ न । किन हामी भाउजु, बुहारी, काकी, माइजु, आमाले प्रगती गर्दा, उनिहरुको बढुवा हुँदा दाइ, काका, मामा, बुवा लगाएतका पुरुष पात्रहरु सधै हेपिएको कल्पना गर्छौ ? दाइ र भाउजुको प्रगती, मामा माइजुको प्रगती, श्रीमान श्रीमतीको प्रगती, काका काकीको प्रगती भनेको सिगो परिवारको, परिबारका आफन्तको प्रगती होइन र ? एउटा परिवार एक्लैले अहिलेको महगीको जमानामा चलाउन कठिन छ, दुबैजना सक्षम हुनुपर्छ, कामकाजी हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म पनि किन भन्न सक्दैनौ ? आफूले दुइ पैसा नकमाउँदै त छोरालाई काबुमा पारेकी छ अझ दुइचार पैसा कमाएपछि त जोइटिग्रे बनाउँछे होला मेरो छोरालाई भन्ने बुआआमा पनि देखिएको छ यही शहरमा । सोँच सकिर्ण भयो भने कसैले कसैलाई दबाउन, हेप्न जागिर खानै पर्दैन, पैसा कमाउनै पर्दैन उसको बोली बचन र व्यवहार नै काफी हुन्छ ।
म चाहन्छु आफ्नी श्रीमती कुनै कार्यालयमा अफिस टाइममा छिरेर निस्कने नहुदैमा कुनैपनि श्रीमानको मन नगिरोस, मेरी श्रीमती घरकी असल व्यवस्थापक हुन, उनले घर सम्हालेको भएर, राम्रोसँग घर व्यवहार धानेको भएर मैले आनन्दसँग कार्यालयमा काम गर्न पाएको छु भन्दा मन शान्त होस । छोराछोरीको, घर व्यवहारको कुनै तनाव नभएपछि खुलेर समय दिएर काम गर्न बातावरण तयार पारिदिएकोमा मेरी श्रीमती धन्य छिन भन्ने भावना आउनुपर्छ । गृहणी श्रीमतीले पनि मेरो श्रीमानले कमाएको पैसाले घर व्यवहार चलेको छ, म श्रीमानको असल सारथी मात्रै होइन मुख्य व्यवस्थापक पनि हुँ भन्ने कुरामा गर्व गर्न सक्नुपर्छ । श्रीमानले कमाउँछ आफ्नो कमाइ छैन भनेर आफैले आफैलाई हतोत्साही बनाउनु हुँदैन । जागिरे श्रीमान श्रीमतीले तलवको घमण्ड होइन कसरी कुसलतापुर्वक घर चलाउने भन्ने कुरामा दुवैजना इमान्दार हुनुपर्छ । मैले छोराको फि तिरे, तिमी छोरीको तिर भन्ने पनि देखिन्छ, छोराछोरी दुबैका हुन, घर दुवैको हो, आफन्त दुबैका हुन, व्यवहार दुबैको दुवैलाई थाहा हुनेगरी पारदर्शी भएपछि जसले जे गरेपनि आफ्नै लागि हो, आफ्नै आफन्तको लागि हो भन्ने भावना आउँछ । यसर्थ, परिवारको सदस्यको प्रगतीमा दुबैजना हिस्सेदार बनौँ हेपिने र हेप्नेको कारक नबनौँ । श्रीमती आफूभन्दा सिनियर भएकोमा गर्वले छाती फुलाएर भन्न सक्नुहोस पुरुष मित्रहरु मेरी श्रीमती म भन्दा बरिष्ठ कर्मचारी हुन । श्रीमान आफू भन्दा तल्लो दर्जामा काम गर्दैमा आफूलाई सानो नठान्नहोस महिला मित्रले, काम सानो ठुलो हुँदैन, दर्जाको स्तर परिवारमा मापन हुँदैन कार्यालयमा दर्जाको मापन हुन्छ घर परिवारमा इज्जत, आदर र समानताको मापन गर्न सिक्नुहोस ।